Dagaalka Dhuusamareeb ee u dhexeya ciidanka Galmudug iyo Ahlu-Sunna oo xoogeystay & ciidamo horleh oo ku biiray | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Dagaalka Dhuusamareeb ee u dhexeya ciidanka Galmudug iyo Ahlu-Sunna oo xoogeystay...
Waxaa sii xoogeystay dagaalka Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug ku dhexmaraya Ciidamada dowladda & kuwa Galmudug oo dhinac ah iyo xoogagga Ahlusunna oo soo weeraray Magaalada.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka socdaa qaybo ka mid ah Magaalada Dhuusamareeb, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan, sidoo kalena Gaadiidka dagaalka ee Cabdi Billaha ay wataan labada dhinac ee dagaalamaya.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Ciidamada Dowladda ee Gorgor iyo Haramcad ay dagaalka ku biireen, kuwaas oo doonaya inay Magaalada ka saaraan dhinacyada ay kasoo galeen Ciidamada xoogagga Ahlusunna.
Waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo dagaalka kasoo gaaray dad rayid ah iyo dhinacyada dagaalamay, waxaana Maanta xiran inta badan Goobaha Ganacsi ee Magaalada Dhuusamareeb.
Previous articleC/kariim Xuseen guulleed oo sheegay inuusan ka qaybgaleyn tartanka madaxweynaha Soomaaliya
Next articleSarkaal horay uga tirsanaa KRA oo dowladda ku wareejinaya hanti dhan 278 milyan